धेरै मोबाइल या कम्प्युटर चलाए गम्भीर समस्या - Everest Dainik - News from Nepal
धेरै मोबाइल या कम्प्युटर चलाए गम्भीर समस्या
काठमाडौँ । गर्धन दुख्ने र रिंगटा लाग्ने समस्या छ ? यदि यस्तो समस्या छ र तपाईं अधिकांश समय कम्प्युटर र मोबाइलमा बिताउने गर्नु हुन्छ भने बेलैमा चिकित्सकको सल्लाह लिइहाल्नुस ।
पछिल्लो समय यस्तो समस्या लिएर चिकित्सककहाँ आउने युवाहरूको संख्या बढ्दो छ । यो लक्षण गर्धनको हाड खिइएपछि देखा पर्ने हो र यो सामान्यतया ५५ वर्षमाथिका पुरुषहरूमा देखा पर्ने गर्दछ ।
तर अचेल ३० वर्ष मुनिका युवाहरूमा पनि यस्तो समस्या देखिने गरेको छ र यसको प्रमुख कारण अत्यधिक मोबाइल र कम्प्युटरको प्रयोग बताइन्छ ।
बीबीसीमा प्रकाशित सामग्री अनुसार हाडजोर्नीसम्बन्धी चिकित्सक राजेश महर्जनकहाँ केही समयअघि यस्तै गर्धन दुख्ने समस्या एक जना २५ वर्षीय युवक आएका थिए ।
प्राय: ५५ वर्षमाथिका पुरुषमा देखापर्ने गर्धनको हाड खिइने रोग ती युवकमा देखेर डा. महर्जन अचम्ममा परे।
डा. महर्जन भन्छन्, “हाम्रो शरीर कम्प्युटर चलाउँदा बस्ने वा मोबाइल चलाउँदा पल्टिने आसनका लागि बनेकै होइन।”
“तर पछिल्लो समय गर्धन दुख्यो भनेर आउने अधिकांश बिरामीको समस्या उनीहरू धेरै बेरसम्म एउटै ठाउँमा हलचल नगरी बस्नु हो।”
त्यस्तो रोग लिएर आउने अधिकांश गृहिणीहरू घरमा मोबाइलमा सामाजिक सञ्जाल चलाएर बस्ने गरेको सुनाउँछन्।
“श्रीमान् अफिस र छोराछोरी स्कूलकलेज गएपछि काम हुँदैन अनि फेसबुक र युट्युब चलाएर बस्छौँ भन्नुहुन्छ,” डा. महर्जनले भन्छन्।
धेरैबेर कम्प्युटर मोबाइलमा बस्ने र दैनिकी नै त्यही बनाउँदा त्यसले सुरुमा गर्धनको मांसपेसी कक्रक्क हुने हुन्छ।
अनि बिस्तारै दुख्न थाल्ने र त्यसपछि घाँटी वा ढाडको हड्डीको आकार परिवर्तन हुन्छ। अन्तत: हड्डी खिइएर स्नायुमै असर परेपछि निको बनाउनै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने उनी बताउँछन्।
डा. महर्जन भन्छन्, “नत्र तिनै युवकको जस्तै हुन्छ जसले धेरै समय आराम गर्नुपर्छ र बाचुन्जेल व्यायाम त गर्नैपर्छ।”
“तर त्यति गर्दा पनि हामीले सामान्य अवस्थामा फर्काउन सक्दैनौँ। उनको खिइएको हड्डी केही गर्दा पनि पहिलाको जस्तो अवस्थामा पुर्‍याउन सकिँदैन।”
मानिसको गर्धनमा मेरुदण्डका सातवटा हड्डी हुन्छन्।
निहुरेर मोबाइल चलाउँदा वा एउटै आसनमा बसेर कम्प्युटरमा काम गर्दा मेरुदण्डको त्यही भाग बोझ पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।
“(मेरुदण्डको) हड्डी धस्सिँदै जाँदाकै अवस्थामा उपचार गरिएन भने खिइन थाल्छ र खिइएपछि नसा (स्नायु) मा छुन्छ,” उनी भन्छन्।
मेरुदण्डले मस्तिष्कलाई स्नायुप्रणालीसँग जोड्छ। मेरुदण्डका हड्डीमा समस्या उत्पन्न हुँदा पूरै शरीरमा समस्या पर्न सक्छ।
“त्यसपछि रिँगटा लाग्ने वा हात झम्झमाउने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ अलि जटिल अवस्थामा पुग्नु हो र पुरानै अवस्थामा फर्काउन असम्भवजस्तै हुन्छ।”
‘आँखामा पनि समस्या‘
दिनमा दुई घण्टाभन्दा बढी कम्प्युटरमा काम गर्नेहरूलाई ‘कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम’ हुने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्।
ट्याग्स: internet addiction